ဂိုးသမားထဲမှာ ပြောင်းရွှေ့ကြေးအများဆုံးအဖြစ် အယ်လစ်ဆန် ရပ်တည်နိုင်မလား
ရိုးမားဂိုးသမား အယ်လစ်ဆန် Alisson ကို စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ ကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့ လီဗာပူးလ်
18 Jul 2018 . 11:57 AM
လာမယ့်ရာသီအတွက် ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်နေတဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ ရိုးမားအသင်းက ဘရာဇီးလ်လက်ရွေးစင်ဂိုးသမား အယ်လစ်ဆန် Alisson ကို ဂိုးသမားတစ်ဦးအတွက် ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေးအဖြစ် ပေါင်(၆၂)သန်းအထိပေးပြီး ကမ်းလှမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ ကာလရှည်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဂိုးသမားပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက်သာမက နည်းပြယာဂန်ကလော့ပ် Jurgen Klopp ကလည်း သူတို့အသင်း လာမယ့်ရာသီမှာ အောင်မြင်မှုရချင်ရင် လက်ရှိဂိုးသမား ကာရီယပ်စ် Karius ရဲ့နေရာကိုထိပ်တန်းအဆင့်ဂိုးသမားတစ်ဦးနဲ့အစားထိုးဖို့ ဆန္ဒရှိနေတာပါ။
အယ်လစ်ဆန်ကို ချယ်လ်ဆီးအသင်းက ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေပေမယ့်လည်း လီဗာပူးလ်အသင်းက လက်ဦးမှုရယူတဲ့အနေနဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အီတလီမီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရ လီဗာပူးလ်အသင်းက အယ်လစ်ဆန်အတွက် ပြောင်းရွှေ့ကြေးသီးသန့် ပေါင်(၅၃)သန်း၊ အောင်မြင်မှုအပေါ် မူတည်ပြီး နောက်ထပ် ပေါင်(၉)သန်းပေးချေသွားမယ်ဆိုပြီး ရိုးမားအသင်းထံ ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့ သိရတယ်။ လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ အခုနွေရာသီအတွင်း နာဘီကီတာ Naby Keita ၊ ဖာဘင်ဟို Fabinho ၊ ရှာကီရီ Shaqiri တို့(၃)ဦးအတွက် ပေါင်သန်း(၁၀၀)ကျော်သုံးစွဲခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမယ့်လည်း သူတို့ရဲ့အဓိက ပစ်မှတ်က ဂိုးသမားသစ်တစ်ဦးခေါ်ယူဖို့ပါပဲ။ ရိုးမားအသင်းနဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်းကြားမှာလည်း ဆက်ဆံရေးကောင်းတွေရှိနေတာကြောင့် အယ်လစ်ဆန်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့က မကြာခင်အထမြောက်လာဖို့ရှိနေတယ်။ တကယ်လို့ အယ်လစ်ဆန်သာ လီဗာပူးလ်အသင်းကို ပေါင်(၆၂)သန်းနဲ့ရောက်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ဂိုးသမားထဲမှာ ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေးပိုင်ရှင် မန်စီးတီးဂိုးသမား အီဒါဆင် Ederson ရဲ့စံချိန်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်မှာပါ။ အီဒါဆင်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက ဘင်ဖီကာအသင်းကနေ မန်စီးတီးအသင်းကို ပေါင်(၃၅)သန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး ဂိုးသမားထဲမှာ ပြောင်းရွှေ့ကြေးအများဆုံးအဖြစ် ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
1. Ederson (Benfica to Man City) – £35m
2. Gianluigi Buffon (Parma to Juventus) – £33m
3. Jordan Pickford (Sunderland to Everton) – £25m
4. Bernd Leno (Bayer Leverkusen to Arsenal) – £20m
5. David De Gea (Atletico to Man Utd) – £18.3m
ရိုးမားဂိုးသမား အယျလဈဆနျ Alisson ကို စံခြိနျတငျပွောငျးရှကွေ့ေးနဲ့ ကမျးလှမျးခဲ့တဲ့ လီဗာပူးလျ
လာမယျ့ရာသီအတှကျ ပွငျဆငျမှုတှေ လုပျနတေဲ့ လီဗာပူးလျအသငျးဟာ ရိုးမားအသငျးက ဘရာဇီးလျလကျရှေးစငျဂိုးသမား အယျလဈဆနျ Alisson ကို ဂိုးသမားတဈဦးအတှကျ ကမ်ဘာ့စံခြိနျတငျပွောငျးရှကွေ့ေးအဖွဈ ပေါငျ(၆၂)သနျးအထိပေးပွီး ကမျးလှမျးလိုကျပွီဖွဈပါတယျ။ လီဗာပူးလျအသငျးဟာ ကာလရှညျရငျဆိုငျနရေတဲ့ ဂိုးသမားပွဿနာကို ဖွရှေငျးဖို့အတှကျသာမက နညျးပွယာဂနျကလော့ပျ Jurgen Klopp ကလညျး သူတို့အသငျး လာမယျ့ရာသီမှာ အောငျမွငျမှုရခငျြရငျ လကျရှိဂိုးသမား ကာရီယပျဈ Karius ရဲ့နရောကိုထိပျတနျးအဆငျ့ဂိုးသမားတဈဦးနဲ့အစားထိုးဖို့ ဆန်ဒရှိနတောပါ။
အယျလဈဆနျကို ခယျြလျဆီးအသငျးက ချေါယူဖို့ စိတျဝငျစားနပေမေယျ့လညျး လီဗာပူးလျအသငျးက လကျဦးမှုရယူတဲ့အနနေဲ့ ကမျးလှမျးမှုတှေ ပွုလုပျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အီတလီမီဒီယာတှရေဲ့ဖျောပွခကျြအရ လီဗာပူးလျအသငျးက အယျလဈဆနျအတှကျ ပွောငျးရှကွေ့ေးသီးသနျ့ ပေါငျ(၅၃)သနျး၊ အောငျမွငျမှုအပျေါ မူတညျပွီး နောကျထပျ ပေါငျ(၉)သနျးပေးခသြှေားမယျဆိုပွီး ရိုးမားအသငျးထံ ကမျးလှမျးခဲ့တယျလို့ သိရတယျ။ လီဗာပူးလျအသငျးဟာ အခုနှရောသီအတှငျး နာဘီကီတာ Naby Keita ၊ ဖာဘငျဟို Fabinho ၊ ရှာကီရီ Shaqiri တို့(၃)ဦးအတှကျ ပေါငျသနျး(၁၀၀)ကြျောသုံးစှဲခဲ့ပွီးဖွဈပမေယျ့လညျး သူတို့ရဲ့အဓိက ပဈမှတျက ဂိုးသမားသဈတဈဦးချေါယူဖို့ပါပဲ။ ရိုးမားအသငျးနဲ့ လီဗာပူးလျအသငျးကွားမှာလညျး ဆကျဆံရေးကောငျးတှရှေိနတောကွောငျ့ အယျလဈဆနျရဲ့အပွောငျးအရှကေ့ မကွာခငျအထမွောကျလာဖို့ရှိနတေယျ။ တကယျလို့ အယျလဈဆနျသာ လီဗာပူးလျအသငျးကို ပေါငျ(၆၂)သနျးနဲ့ရောကျရှိခဲ့မယျဆိုရငျ ဂိုးသမားထဲမှာ ကမ်ဘာ့စံခြိနျတငျပွောငျးရှကွေ့ေးပိုငျရှငျ မနျစီးတီးဂိုးသမား အီဒါဆငျ Ederson ရဲ့စံခြိနျကို ကြျောဖွတျနိုငျမှာပါ။ အီဒါဆငျဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက ဘငျဖီကာအသငျးကနေ မနျစီးတီးအသငျးကို ပေါငျ(၃၅)သနျးနဲ့ပွောငျးရှခေဲ့ပွီး ဂိုးသမားထဲမှာ ပွောငျးရှကွေ့ေးအမြားဆုံးအဖွဈ ရပျတညျနတောဖွဈပါတယျ။